Haadholii dirqiin gudeedamanii ilmoo isaanii guddisuufis carraa dhaban - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright EHRP
Goodayyaa suuraa Aadde Tsiggee Mekonnin
Piroojektiin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa (EHRP) dhimma dirqiin gudeedamuufi daa'imman hayyamaa isaanin ala guddifachaaf jalaa kennamuu haadholii sadii marsariitii isaarrattii gabaasa baaseera.
Dhuma bara 1970fi jalqaba bara 1980tti direektarri 'Mana Barumsaa namoota dhagahuu hin dandeenyee Makkaniisaa'' barattoota ijoollee dubaraa mana barumsichaa dirqisiisee gudeedaa ture jedha gabaasichi.
Yeroos ulfaa'an immoo mana barumsaa irraa akka hafan, yeroo mucaa godhatan daa'imman isaanii dhaabota tola oolaniif kennisiisuun gochaan isaa akka dhokfamu gochaa tures jedha.
Yeroos manni barumsaa kun ''Waldaa namoota dhagahuu hin dhandeenyee Itoophiyaa'' jedhama ture. Eenyummaan barsiisaa kanaa gabaasicha keessatti hin eeramne.
Gabaasi piroojektii mirgoota namoomaa Itoophiyaan bahe kun seenaa dubartoota sadiii hima.
''Jalqaba ijoollee koo lakkuu argachuun barbaada'' kan jedhan Tsiggee Mekonnin maqaa isaa ammaan mana barumsichaa keessatti barattuu kutaa jahaa wayita turan direektara mana barumsichaan dirqiin akka gudeedaman himu.
''Yeroos na waamee gaafa dirqiin ana gudeedu barattoonnifi barsiisonni hundi beeku ture."
"Direektarichi barattoota biiroo galchee maal akka godhu namni hundi ni beeka, namni narraa dhorke garuu hin turre'' jedhu.
Bara 1987 A.L.A umuriin ganna 14'tti ijoollee lakkuu dahuu isaaniis dubbatu.
"Ijoolleen koo lamaanuu dubaroota, otoo waggaa illee hin guutiin na jalaa fudhataman. Ijoollee koo guddifachaan kan fudhatan faranjoota. Hayyama koo ala fudhatan" jedhu.
Hanga amma waa'ee daa'imman isaanii odeeffannoo sirrii tahe akka hin qabne himaniiru.
Seenaa wal-fakkaataa kan qaban Waggaayahu Warquu barumsa isaanii kan addaan kutan direektarri mana barumsichaa isaan gudeedee ulafaa'uu isaaniin qaanan'anii akka tahe gabaasichi ni hima.
Yeroos shamarree ganna 13 akka ta'aniifi daree barnootaa keessaa baase gara bosona naannoo sana jiruu geessee akka isaan gudeede himu.
Mucaa isaanis gara biyya alaa kan erge namuma kana ta'uu dubbatu.
Goodayyaa suuraa Aadde Wagaayyahu Warquu
''Ani kanan arge yeroo mucaa makiinaattii galchani dha. Yeroos akkoon koo mucaa guddifachaaf kennuu gaafa murteessitu ani aaree qofaa koo boo'aan ture'' jedhu.
Ammalle mucaa isaanii arguu akka fedhan dubbataniiru.
Taaddalech Araddaa immoo yeroo sadii yaaliin gudeeddii irra gahee humnaan harkaa bahuu dubbatu.
"Ergaan bilbilaan akka naaf dhufeefi inni akka naaf hiiku natti himee yeroo hedduu biirootti na waama. Ani garuu waan inni warra kaan irratti raawwatu waanan beekuuf yoon deemes balbalarran dhaabadha ture" jedhu.
"Humnaan ol na galchee na gudeeduuf yaalees ala sadii gootummaa koon harka isaa jalaa bahee isa mo'adheera" jedhu.
Lammiilee dhagahu hin dandeenye waliin waggoota saddeetii oliif hojjedheera kan jedhan Obbo Malaake Mulugeetaa, seenaa kana garuu dhiyeenyattii dhagahuu hima.
''Akka seera biyyattiitti yeroon yakki tokko itti ilaalamu akka darbu ogeessota seeraa irraa waanin hubadheef dhimmicha gara keessam [Pirojektii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa] fide'' jedhu.
Piroojektiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhimma haadholii kanneenii duuka bu'ee akka hordofu himeera.
Tajaajilli telekoomii adda cite har'arraa eegalee akka deebi'u murtaa'e
Itoophiyaatti namooti dabalataa sadi koronaavaayirasiin qabamuun mirkanaa'e
Biyya tokkittii waa'ee weerara koronaavaayirasii hin yaaddofne
"Daawwannaa keenyaan biyyi nagaa ta'uusaa ilaallee jirra"
'Guyyaan qaama-saalaa malee akkan dhaladhe itti bare'
Seraaliyoon seera ijoollee durbaa barnoota dhorka jette haqxe
Paastariin koronaavaayirasiin Afrikaa keessa hin jiru jedhe himatame